कस्ता बिरामीले रातो मासु नखाने ? बासी मासु खाँदा के हुन्छ ? - Khabar Break | Khabar Break
वर्षमा एकपटक आउने चाड हो भनेर खानपिनमा ध्यान नदिने स्वभाव आमनेपालीको देखिन्छ । तर, यही १० देखि १५ दिनको अवधिको हाम्रो जीवनशैलीमा गरिने लापर्बाहीले मृत्युको अवस्थासम्म पु-याउन सक्छ । खानका लागि बनाइएको चाडको रूपमा हामीले यसलाई लिनुहुन्न । शरीरको आवश्यकताअनुसार मात्रै मासुलगायतका खाद्यपदार्थ खानु उपयुक्त हुन्छ ।
कस्ता बिरामीले नखाने रातो मासु ?
नेपालमा पछिल्लो समय थाइराइड, डायबिटिज, हाइपोटेन्सन, किड्नी, मुटुको समस्यालगायतका नसर्ने रोग बढी देखिने गरेका छन् । कुनै समय सरुवा रोगको प्रकोप हुने गरे पनि हाम्रै जीवनशैलीको लापर्बाही तथा समय परिवर्तनसँगै आएको सेवा–सुविधाको उपभोगले पनि नसर्ने तथा गम्भीर रोगहरू देखिएका छन् ।
युरिक एसिड, सुगर, डायबिटिज र ब्लडप्रेसर हाई भएका बिरामीले रातो तथा बोसोयुक्त मासु सकभर खानुहुन्न । खसी, बोका, राँगाको रातो मासु तथा बोसोयुक्त मासुले सुगरको मात्रा बढ्छ ।
सुगरको मात्रा बढ्यो भने बिरामीको किड्नी फेल हुन सक्छ, प्यारालाइसिस हुन सक्छ । यी रोगबाट पीडितहरूले रातो मासु सकभर कम खानुपर्छ । यस प्रकारको स्वास्थ्य समस्या भएकाहरूले रक्सी तथा मासु धेरै खाएमा मृत्युको अवस्थासम्म पु-याउन सक्छ ।
दसैँमा बिदाको समयमा आराम गर्ने चलन धेरैको हुन्छ । स्वस्थ मानिसले लगातार मासु खाने तथा आराम गरिरहनाले पनि समस्या आउन सक्छ । नियमित रूपमा गर्दै आएको शारीरिक कसरत गर्न छाड्नुहुन्न । शारीरिक श्रम नगर्ने तथा एकोहोरो खाई मात्र रहेमा पचाउन गाह्रो हुन्छ । पचाउन गाह्रो हुँदा झाडापखालालगायतका समस्या आउन सक्छ ।
शरीरले पचाउनेभन्दा बढी मासु र रक्सी खानुहुन्न । साथीभाइ जमघट भएर खाउँ न त भनेर रातभर अनिदो बसेर रमाइलो गर्ने, रक्सी–मासु खाने पनि कतिपयको योजना हुन्छ । यसो गर्दा झाडाबान्ता मात्रै नभई तत्काल नदेखिए पनि दीर्घकालसम्म असर गर्ने रोगको कारक बन्न सक्छ ।
बासी मासु खाँदा
दसैँमा धेरै दिनलाई पुग्ने मासु राख्ने गरिन्छ । यसो गर्दा मासु सुरक्षित राख्नुपर्छ । एकपटक पकाएको मासु धेरै दिन राखेर खाने चलन पनि छ । यसो गर्दा गनाएको वा सड्न थालेको मासु खानुहुन्न । एकपटक पकाएर अरू दिनलाई राखिएको मासु खानुअघि राम्रोसँग फ्राई गरेर, तताएर खानुपर्छ ।
फलफूल र सागसब्जीसमेत खानुस्
दसैँमा मासु मात्रै खाइरहनुको सट्टा फलफूल र सागसब्जीसमेत खानुपर्छ । यसो गर्दा शरीरलाई आवश्यक पर्ने सन्तुलित भोजन मिल्छ । दसैँ भनेकै मासु र रक्सी खानका लागि भन्ने मानसिकता पनि कतिपयको हुन सक्छ ।
दसैँमा आफन्तकोमा टीका थाप्न गइन्छ । यस्तो अवस्थामा धेरैजनाको भान्साको परिकार खाने गरिन्छ । चित्त बुझाइदिनकै लागि पनि खाइदिनुपर्ने अवस्था हुन्छ । यसो गर्दा एउटैको घरमा टन्न खाने र अर्कोकोमा पुगेपछि फेरि बलजफ्ती खाने गर्दा शरीरले मागेभन्दा बढी खान पुगिन्छ । यसो हुँदा स्वास्थ्य बिग्रन सक्छ । यस्तो अवस्थामा हामीले प्रत्येकको घरमा एक–दुई पिस मात्रै मासु वा अन्य खाद्यपदार्थ थोरै–थोरै लिन सकिन्छ ।
मासु खाँदा ख्याल गर्नुपर्छ
हामीले दसैँमा मासुको रूपमा भेडा, च्याङ्ग्रा, खसीबोका, राँगोलगायतलाई लिने गरेका छौँ । आफूले मासुको रूपमा प्रयोग गर्न लागेको जनावर रोगी हुन सक्छ । यसतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । अस्वस्थ जनावर तथा पंक्षीको मासु खाँदा स्वास्थ्यमा समस्या देखिन्छ ।
मासुपसलबाट मासु ल्याउने क्रममा सफा तथा ताजा मासु मात्रै प्रयोग गर्नुपर्छ । सार्वजनिक निकायले यस्तो वेलामा मासुको रूपमा प्रयोग गर्ने खसीबोकालगायतलाई रोग लागेको छ कि छैन, खान उपयुक्त छ कि छैन भनेर अनुगमन गर्दा राम्रो हुन्छ ।
मरेका जनावरको मासु प्रयोग गर्दा समस्या निम्तिन सक्छ । त्यसैले दसैँलाई उत्सवको रूपमा मनाऔँ । हाइजेनिक मासु प्रयोग गरौँ । मदिरा सेवन गर्नुहुन्न भन्दाभन्दै सेवन गर्ने बानी कतिपयको हुन्छ ।
दसैँका वेला अत्यधिक मदिरा सेवन नगरौँ । यस्ता चाडपर्वमा आफ्नो स्वास्थ्यलाई नै पहिलो प्राथमिकतामा राख्न सकियो भने स्वस्थ जीवन बाँच्न सकिन्छ ।